Warbixin: Waa kuwee shanta ciyaaryahan ee caanka ah ee guursaday sanadkan 2017
Sunday, March 24th, 2019 - 09:36:38
Friday December 29, 2017 - 03:37:10 in Wararka by
waxaa dhacay guurka ciyaaryahano badan oo caan ah oo ka mid ah ciyaaryahnada ka ciyaara shanta horyaal ee ugu waa weyn qaarada yurub.
2017 ,waxa uu ahaa sanadkii ay guursadeen ciyaaryahanada ugu badan ee ciyaara kubada cagta.
Warbixintaan,waxaa ku soo qaadan doonaan shan ciyaaryahan oo caan ah oo guursaday sanadka 2017 oo hada dhamaadka maraya
Mateo Kovacic ayaa loo aqoonsaday inuu yahay dhaxalka badalka khadka dhexe Real Madrid Luka Modric .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa si aad ah u jecel gabadha lagu magacaabo Andrijanic ,waxaana uu ku guursaday bilowgii sannadkan.
xaflada arooska ,waxa ay ka dhacday Westin Hotel ee Zagreb ku taalaa . ,waxa ka soo qaybgalay inta badan saaxibadiisa Real,iyo dadka oo caan ah.
Real Madrid ayaa iska iibisay laacibkaan,. Ka dib markiiay ka soo ceshteen kooxda ka dhisan Turin eeJuventus, Alvaro Morata ayaa laga soo iibsaday Madrid xagaaga 2016. Waxa uuna u ahaa xili ciyaareedkaas mid aad u fiican.
Inkastoo uu dhaliyay 20 gool tartamada oo dhan, waxa uu ka careysiisay Zidane isagoo ku adkeysanaya inuuka hormariyo Karim Benzema oo ah weeraryahan ilaaya iminka uu aamisanyahay Zidane.
Xiddiga reer Spain ayaa ka tagay gurigiisa Real Madrid,waxa uuna ku biiray Chelsea horaantii xagaagaan, laakiin ma uusan ilaawin in uu guursado jacaylkiisa noloshiisa, Alice Campello,,waxa uu arooskooda ka dhacay jaziirad ku taala taliyaaniga.
dad ka badan 400 qof ayaa lagu martiqaaday arooska.
Tan iyo Morata markii uu ka soo baxay bishii malabka 10 gool oo horyaalka ah ayuu Chelsea u dhaliyay 17 kulan oo uu u saftay.
Waxaan qabaa inayan noqon laheyn sheegasho been ah markaan dhahayo Kevin De Bruyne ma ahan mid aad u qiimeeynaya dumarka,Kubadsameeyaha reer Belgium ayaa qaab ciyaareed wanaagsankula jira xiliganManchester City ,Wolfsburg ka hor inta uusanimaan Chelsea ayee wada socdeen gabadha uu iminka guursaday.
XaaskaKevin De Bruyne,waxaa lagu magacaabaa Michele Lacroix. Lamaanayaashu waxay xiriir la lahaayeen tan iyo 2014 waxaynaheestaan oo u jooga wiil magaciisu yahay Mason Milan. De Bruyne maahan kaliya nin ku wanaagsan garoonka dhexdiisa, laakiin sidoo kale jaceyl kale oo ka baxsan garoonka ayuu soo bandhigay,asiga oo arooskiisa ka dhacay Tower Eiffel ee ka tirsan France bishii December.
Waxayna si cad u ogolaatay, in uu arooskoodu dhaco bishii Juun eebartamihii sannadkan.
Xiddiga Faransiiska ah ayaa loo badinaayay inuu xagaan ka tago kooxdiisa Atletico Madrid ,ayadoo ay xiiseenaayeen kooxo badan oo ka dhisan qaarada yurub.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu muujiyay daacadnimadiisa wuxuuna go'aansaday in uu sii joogo kooxda sababtoo ah ma aysan helin bedelkiisa..
Laakiin xagaagaan oo dhan uma ahayn ,waxa uu si qarsoodi u guursaday gabadhii ay wada socdeen ee Erika Choperena arooska ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Toledo, oo ka tirsan Spain.
Waxyaabaha kaliya ee cadeenaya in uu arooska dhacay ayaa ah in uu Griezmann uu soo bandhigay muuqaal kooban oo cadeenaayo in uu guursaday gabadhii ay wada socdeen ee Erika.
Ugu dambeyntii, waxaan soo gaarnay waqtigii lagaga hadli lahaa arooskii ugu caansanaa ee dhacay sannadkaan 2017.
: Antonella Roccuzzo iyo Lionel Messi.ayaa dhigtay aroos cajiib ah oo dad badan ka yaabiyay,waxaa ka soo qaybgalay dad badan oo caan ah.
xiriirka labadaan lamaane ayaa socday muddo ka badan labaatan sanadood, labadawaxa ay ka soo jeedaanArgentine ugu dambeyntii waxay isku guursadeen guursadeen magaalada lagu magacaabo Rosario.
Qaar badan oo ka mid ah xiddigaha ciyaara kubada cagta ayaaka qayb qaatay guurka,waxa ayna gaarayeen250 qof.